Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vambosiya zororo ravo kuitira kuti vakwanise kupinda mumusangano nenhengo dzesangano ravanachipangamazano vavo rePresidential Advisory Council.
Izvi zvaziviswa nemutauriri wemutungamiri wenyika, VaGeorge Charamba, kuburikidza nedandemutande reTwitter apo vanoshandisa zita remadunhururirwa rekuti “Jamwanda”.
VaCharamba vati musangano waitwa nhasi uyu wanga wakanangana nekuzivisa zvipangamazano izvi gwara nezvirongwa zvehurumende mugore rino ra2020, iro richangotanga.
VaCharamba vati VaMnangagwa vazivisa kuti gore rino igore rezvigadzirwa pamwe nezvirimwa uye kukura zvichibva muzvirongwa zvekuvandudza hupfumi zvakadzikwa mugore rapera.
Mutauriri wemutungamiri wenyika uyu azivisawo kuti VaMnangagwa vachambodzokera pazororo ravo vachienda kupurazi ravo reSherwood kuKwekwe, vozoridimura zvakare neMuvhuro svondo rinouya.
VaCharamba vati VaMnangagwa vachange vachisangana negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muChina, iro riri kutarisirwa kupinda munyika mangwana murwendo rwaro rwemazuva matatu.
Studio7 yakundikana kubata VaCharamba sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Doctor Urayayi Zembe, vanoti havaoni chikonzero chekuti VaMnangagwa vangambosiya zororo ravo vachipinda misangano, ipo paine mutewedzeri wavo, VaConstantino Chiwenga, vakafanobata matomu.
Vanotiwo zvinogona kuita kuti VaMnangagwa vashevedzwa naVaChiwenga kuti vavabatsire sezvo ivo VaChiwenga vakanga vatora mwedzi inoda kusvika mitanhatu vasiri pabasa sezvo vakanga vari kuSouth Africa nekuChina uko vairapwa.
Asi Doctor Zembe vanoti havaone paine chinobuda kubva kuPresidential Advisory Council sezvo gore rapera rose pasina chinobatika chavakaburitsa, kana kuzvisa nyika, kunze kwekunge zvavaiisa zvairaswa naVaMnangagwa.
Pamashoko emutungamiri wenyika ekuti gore ra2020 igore rebudiriro, Doctor Zembe vanoti havaoni zvichiitika sezvo maindasitiri asina chaari kugadzira, kusina magetsi pamwe nemvura, uye nyika isina mari yekunze.